Lungisa ii-Quotes zeSmart ngamaQabane aQhelekileyo kwiMicrosoft Word -Geofumadas
Lungisa ii-Smart Quotes zeeQuotes ezichanekileyo kwiMicrosoft Word
NgoDisemba, 2011 Internet kunye neBlogs
Oku kudla ngokuba yingxaki, xa sihlela i-html umbhalo kwi-Microsoft Word okanye Live Writer.
Ingxaki ikhowudi efana nayo
"/ imibuzo-engaqhelekanga-malunga-technologies-cad /"> Imibuzo engaqhelekanga malunga neCAD Technologies
Kuya kusinika ingxaki, kuba amanqaku okucaphulwa esiwahlalayo kufuneka abe yimigca ngendlela elandelayo:
«/ imibuzo-engaqhelekanga-malunga-technologies-cad /«> Imibuzo engaqhelekanga malunga neCAD Technologies
Xa sifuna ukufaka endaweni kwiLizwi, iyasityeshela, kwaye xa sinoluhlobo oluthile lwefonti apho utshintsho lungabonwayo, impambano iba mbi. Nazi ezinye zeengcebiso:
Kuya kufuneka sigcine ukhetho oluza kusichaphazela. Kubandakanya indawo yedash ende, khumbula ukuba ilebheli yohlobo yayiya kulahleka, kwimeko apho siyikopisha / sinamathisele iZwi kwi-LiveWritter okanye umhleli weWindowsPress.
Ingxaki ingaba yinto engabalulekanga ize ikopishe umxholo we-html kwi-WordPress okanye umhleli wekhowudi uze uyihlanganise kwi-LiveWritter, okanye iLizwi.
2. NgeLizwi leMicrosoft
Oku kwenziwa kwi "Ifayile> Khetha", njengeLiveWritter. Lumka, kuya kufuneka wenze utshintsho kwi-AutoFormat kunye neeTebhu zeZenzo, njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo:
3. Ungawutshintsha njani isicatshulwa esichanekileyo
Kwimeko apho sele ikho, emva koko kukhangelwe / kwenziwe kwakhona. Khumbula ukuba kolu khetho, iLizwi aluwuvumeli umohluko, kodwa kuba ukhetho lweempawu zokucaphula alusebenzi, luya kuthatha indawo yabo bonke ngeempawu zokucaphula ngqo.
Ukukhubaza oku kwinqanaba leWindowsPress, kufuneka usebenzise iplagin wpuntexturize
Office for ebulalayo Wordpress
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Geofumadas, i-2011 Legacy
Post Next 10 40 + iintetho zenkomfa SIG Mahala 2012Okulandelayo »